बोध कथा बाट केहि ज्ञान सिक्नुहाेस् – www.agnijwala.com
बोध कथा बाट केहि ज्ञान सिक्नुहाेस्
सन्त तिरुवल्लुवर आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा एक सानाे ब्यपारी थियो। साडी वा आवश्यक कपडाको सानो पसल थियो। एकचोटि केहि लफाङ्गा केटाहरू उसको पसलमा आए र मोलतोल गर्न थाले। एक जना धनी केटाले साडी उठाई सोध्यो, ‘यसको मुल्य केति हो?’
‘दुई पैसा?’लफाङ्गाे केटाले साडीलाई दुई टुक्रा पारे र फेरि सोधे, ‘अब यसको मूल्य केति हुन्छ?’
मलिन स्वरमा भने प्रत्यक भागको लागि एक रुपैया।’
केटा लफाङ्गा थिए र उनीहरु उनीहरुलाई कुटपिट गर्ने उद्देश्यले पसलमा आएका थिए। केटाले साडी काटे र हरेक पल्ट यसको मूल्य माग्दै गयाे । सन्तले उसलाई मूल्य अनुसार बताइरह्याे।
जब साडी टुक्रिएको थियो, केटाले भन्यो, ‘अब म यो साडी किन्दिन। मलाई यी टुक्राहरू के प्रयोग हुन्छन् र ? ‘
सन्तले भने, ‘तपाईलाई त के यो कसैका लागि केही कामको हुँदैन।’
यो सुनेर त्यस केटोले केही लज्जित महसुस गर्यो। अन्त्यमा उसले भन्यो, ‘ठिक छ, यी दुई रूपैया लिनुहोस्, यसले तपाईको घाटा पूरा गर्नेछ। “उसले पैसा दिन चाहान्थ्यो, तर सन्तले ती रुपियाँ लिएन।
सन्तले भने, ‘यदि तपाईंलाइ घाटा छ भने कसैले पनि यसलाई भर्दैन। किसानहरूको कडा परिश्रमले कपास उत्पादन गर्छन, कपासबाट मेरी श्रीमतीले कताउछे, मैले यसलाई र पुन तयार बनाउछु र धेरै मेहनेत पछि मात्र याे तयार हुन्छ।
कति जना मानिसहरुको श्रम व्यर्थ गयाे? के कसैले पनि यस घाटालाई रुपैयाँले पुरा गर्ला ।
ति ब्यपारीले यी सबै कुरा एकदम शान्त मनले भनेका थिए, कुनै जोश वा हानीको कारणले होइन। मानौं कुनै बाबुले आफ्नो छोरालाई बुझाइरहेका छन्।त्याे केटाले यो सबै सुनेर लज्जित भयो। उसको आँखा भरियो। अचानक उनीहरू ती ब्यपारीकाे खुट्टामा लडे। उनले उनीहरूसँग बारम्बार माफी मागे।
ती ब्यपारी एक सन्त थिए,त्यसैले उनी उनीसँग रिसाएनन्,
केटा चुपचाप बाहिर निस्के।